Iindaba -Ubavumela njani abathengi bathenge ngokukhululeka phantsi kwesi sifo
Ungabavumela njani abathengi ukuba bathenge ngokukhululeka phantsi kobhubhane
Ukusukela ukuqhambuka kwe-COVID-19, asinakho ukuya kwinother ilizwe, ndwendwela iifektri ukujonga umgangatho weemveliso, kwaye wenze ukuthengwa kwesiza njengangaphambili. Inkqubo ye- I-coronavirus iya kuqhubeka kangangexesha elithile, ngenxa yale meko, iqela leMingding libambe intlanganiso yangaphakathi ngomxholo othi "ulawulo lomgangatho ngokungqongqo ,Inkqubo yemveliso ibonwe ”. Abamele intengiso isebe, iR & D isebe kunye nesebe lemveliso, isebe lokusebenza kwemveliso, emva-kwentengiso yesebe lenkonzo liye kwintlanganiso. UMongameli weqela u-Eric ubeke phambili iimfuno ezintathu entlanganisweni: 1. Khawulezisa ukwakhiwa kweqonga losasazo lwenkampani, ukuze abathengi batyelele umzi-mveliso wethu ngelixa besela ikofu ekhaya. 2. Inkqubela phambili yokuveliswa kweemveliso zabathengi phantsi kwemveliso iya kuboniswa kumthengi ngohlobo lwevidiyo yokufowuna kwangexesha: 3. Njengoko kungenakwenzeka ukuba uye phesheya utyelele abathengi abadala ngeenkonzo zabo, emva kokuthengisa abasebenzi kufuneka banxibelelane ukuthengisa isebe kunye sebenzisa umnxeba wevidiyo oya buza malunga i iingxaki ngelixa abathengi sisebenzisa oomatshini bethu. Ukuba banokusombulula ingxaki kwifowuni yevidiyo, kufuneka banike esona sisombululo sisiso kubathengi.
Ngexesha elikhethekileyo, kufanelekile Qiniseka umgangatho weemveliso zethu ngcono kwaye uphathe umgangatho njengobomi bethu.Ukuba sikhathalele ngakumbi kwimveliso, iingxaki ezimbalwa iya kuba kwiimveliso.
Ngexesha lentlanganiso, besithetha nabameli bethu abavela e-Asiya nase-Yuropu, abathe bahlalutya iimakethi zabo kwaye babulela inkampani ngokuxhasa ngokusungula ishishini labo.
Ekupheleni kwentlanganiso, uEmma, ​​umphathi weSebe lezoRhwebo lwaNgaphandle, wafunda ileta eya kumthengis, apho kwakhankanywa ukuba ngaxeshanye intsebenziswano yenziwe umhlobo wobomi. Nangona sahlukane ngamawaka eekhilomitha, iintliziyo zethu zihlangenewoyisiwe ngabantu, ekugqibeleni siya kudibana kwakhona.